Madaxweynaha DDS oo faah faahiyay sababta ay Ciidamada ugu direen Gobolka Tigreega - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Madaxweynaha DDS oo faah faahiyay sababta ay Ciidamada ugu direen Gobolka Tigreega
Madaxweynaha dowlad Degaanka Soomaalida Mustafe Muxumed Cagjar ayaa sheegay in sababta ay Ciidamada dowlad degaanka ugu direen Gobolka ay dagaalada ka socdaan ee Tigreega uu yahay dalab uga yimid Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha oo la hadlay BBC-da waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray in Ciidamada ay u direen gobolka Tigreega ay ka qeyb qaadanayaan dagaalka ka dhan ah Kooxda TPLF, isla markaana ay xoojin doonan Ciidamada Federaalka.
Sidoo kale waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray in Ciidamada dowlad degaanka Soomaalida ay ka tirsan yihiin Itoobiya, isla markaana mushaarkooda iyo Agabkooda Ciidan ay bixiso dowladda Itoobiya.
Gobolka Tigreega ee Waqooyiga dalka Itoobiya ayaa waxaa ka socda dagaal u dhaxeeya Ciidamada Federaalka Itoobiya iyo kuwa xoogga TPLF oo dib u soo rigaal celiyay, waxaana dowlad degaanka Soomalida u noqday Maamulkii Afaraad ee Ciidamo u dira Gobolka Tigreega.
Previous articleDHAGEYSO:-Warka Subax ee Radio Risaala 19-07-2021
Next articleGabadhii u horeysay ee Afrikaanka Madow oo ka qeyb galayso Tartanka Baaskiilka ee Olombikada